O adabara maka ịgbado ọkụ nke carbon carbon na obere ngwongwo ígwè, dị ka Q345, ihe ndị ọzọ.
E7018 bụ isi ntekwasa ígwè ntụ ntụ ala potassium hydrogen ụdị electrode. Ma AC na DC nwere ike iji ya mee ihe ma nwee ike ịgbado ọkụ. Ọ nwere ike iru ezigbo ọrụ ịgbado ọkụ arụmọrụ, ezigbo arc isi, obere spatter, mfe slag mwepụ na ezi Weld anya, elu deposition arụmọrụ, na ike belata ịgbado ọkụ n'ígwé.
Nchọpụta ntụpọ X-ray: Ⅰ ọkwa
PLỌ MGBE (Ogo Ogo):%
AKWOPKWỌ AKW :KWỌ:
Mgbapụta / RpUgboro abụọ MPa
Mgbatị A /%
Ahụkarị ọrụ usoro: (AC, DC +)
Dayameta na (mm)
Ugbu a na (A)
1. Electrode ga-mma site 350-380 ℃ maka 1 hour tupu ịgbado ọkụ, kpoo electrode mgbe iji ya.
2. A ga-ewepu nchara, mmanụ, mmiri na adịghị ọcha ndị ọzọ nke weld tupu ịgbado ọkụ.
3. Ga-eji obere arc ịgbado ọkụ, swings ekwesịghị ibu oke, warara bead ịgbado ọkụ kwesịrị ekwesị.
4. Iji gbochie imepụta pocity arc, a ga-anabata arc plate ma ọ bụ jiri usoro nloghachi maka ịgbado ọkụ.
Anyị na-akwado OEM / ODM ma nwee ike ịme nkwakọ ngwaahịa dịka atụmatụ gị, biko kpọtụrụ anyị maka mkparịta ụka zuru ezu.
Shijiazhuang Tianqiao ịgbado ọkụ Materials Co., Ltd e hiwere na 2007. Dị ka ọkachamara ịgbado ọkụ electrode emeputa, anyị nwere ike oru ike, zuru ezu ngwaahịa ule ngwá mere na anyị nwere ike na-anụ ngwaahịa mma. Anyị na ngwaahịa na-agụnye iche iche nke ịgbado ọkụ electrodes na ika nke "Yuanqiao", "Changshan", dị ka ala carbon ígwè, Iow alIoy ígwè, okpomọkụ na-eguzogide ọgwụ steels, obere okpomọkụ ígwè, igwe anaghị agba nchara, igba ígwè, igba ígwè, ike ịgbado ọkụ ịgbado ọkụ electrodes na dị iche iche mbuaha ịgbado ọkụ.
The ngwaahịa na-ọtụtụ-eji dị iche iche na mba aku ubi, dị ka ígwè, nkà mmụta banyere ígwè, mmanụ mmanụ chemical ụlọ ọrụ, ji esi mmiri ọkụ, mgbali arịa, ụgbọ mmiri, ụlọ, àkwà mmiri, na na, The ngwaahịa na-ere ka mba nile, na ọma natara site na nnukwu ọrụ. Anyị na ngwaahịa nwere magburu onwe arụmọrụ, anụ àgwà, mara ịgbado ọkụ ịkpụzi, na ezi slag mwepụ, ezi ikike iguzogide nchara, Stomata na mgbape, ezi na mụ edebe metal arụzi arụmọrụ. Anyị na ngwaahịa na-otu narị percent exported na-ere ụwa ọtụtụ ebe, tumadi na US, Europe, South America, Australia, Africa, Middle East, Southeast Asia na wdg Anyị na ngwaahịa izute ahịa 'ọkụ nnabata ruru ka ndị magburu onwe ya mma, pụtara ìhè arụmọrụ na asọmpi ego.
Nke gara aga: Z408 Nickel Pipe Nkedo Iron Electrode AWS ENiFe-CI
Osote: Igwe anaghị agba nchara ịgbado ọkụ Electrode AWS E309L-16 （A062）